Challenge The Good News Paper - Aimbove akarasika akazowanikwa (Shona)
Michael anoti " ndakadzidziswa nezvaMwari webhaibheri kukereke yevadiki nyangwe hazvo ndakanga ndisina hukama naye."
Paaikura, Ruzivo urwu nary a kukwanisa kumubatsira kubva kushamwari dzaimufurira. Michael akatanga kusvuta mbanje, kunwa Doro, kubira vabereki vakee pamwe nokuita zvepabonde.
Semuenzaniso; Michael paaiva mugwaro repfumbamwe, iye neshamwari dzake vakaenda kubhawa uko akanonwa Doro ndokudhakwa zvikuru zvokuti nanhasi haatozivi kuti akazosvika sei kumba. Anotofunga kuti shameari dzake ndidzo dzakazomutakura kyenda kumba
Paakanga Ava namakore Gumi nemaofumbamwe, Michael akaenda pamusangano wevechidiki uyo waiitirwa pakereke yaiva mumana mavo apo akawana dzoreredzo muupenyu hwake.
Anoti"ndakanga ndambonzwa vhangeri kwenguva refu asi musi wa27 Zvita gore ra1987, ndakarinzwa nenzira yakajekesesa." Musi uwu Michael akanzwa kubatika pamusoro pemabasa ake awo akanga asina kunaka . Akaona kuti akanga asiri chinhu Paso a Mwari, anoti" musi uwu ndakasarudza kuzvipira kuva mutendi" nomufaro anoti" Shoko raMwari rakandibata zvokuti pakanga pasisina imwe nzira kunze kwokutendeuka nokuzvipira kunaKristu."
"Ndakabvuma zvivi zvangu maringe nendima iri munaVaRoma.3:23 iyo inoti" vose vakatadza vakasava nokubwinya kwaMwari" ndakatenda kuti Kristu oga ndiye anogona kundiponesa. Ndakamupupura kuti ndiye muponesi wangu." Achitora ndima munaJohani.1:12 inoti" asi Kuna vose vakamugamuchira akavapa simba rokunzi vana vaMwari, Kuna avo vanotenda muzita rake."
Michael anoti kubva ipapo hupenyu hwake hwakashanduka zvikuru
Anoti" shanduko huru ndeyokuti ndakasiya kunwa Doro, kusvuta pamwe nokuita zvivi, ndakarasikirwa neshamwari dzangu dzose dzakare ndokungosara nowechidiki uyo wandaisangana naye achindidzidzisa kuva mutendi. Ndakakumvira vabereki vangu ruregerero nokuda kwenhema dzandaivaudza uyewo ndakavadzorerawo Mari yandainge ndavabira. Pamusoro pezvo ndakaendawo kuvasikana vose vandaifambidzana navo ndichivaparidzira nezveshanduko iyo yainge yaitika muhupenyu hwangu."
Michael anofara zvikuru nokuda kwenudzidzisi uyo akazvipira kumudzidzisa nokumupa ndima dzokuverenga zvinova zvakaita kuti akure mukutenda kwake. Anoti" Mwari akandibatsira kuburikidza nomudzidzisi uyu. Zvakanga zvakaoma asi Mwari vakandibatsira."
Ndima inofadza Michael ndeiri pans 2vaKorinde.5:17 iyo inoti' kana munhu Ava munaKristu Ava chinhu chitsva zvakare zvapfuura, tarira zvose zvava zvitsva'
Kuna vose varikutambura nokushandura hupenyu hwavo , Michael anoti"ongorora vanhu vaunofamba navo, fambidzana nevanhu vanokubatsira uyewo pira hupenyu hwako Kuna Kristu."
Parizvino Michael atova namakore anopfuura makuni matatu Ari mutendi uyewo akawana, achigarawo kunyika yeZambia.•
<< Once lost but now found
Owayelahlekile usetholakele (Zulu) >>